Fanodinkodinam-bola tao amin’ny Jirama : Efa eny anivon’ny Fitsarana ny raharaha -
AccueilRaharaham-pirenenaFanodinkodinam-bola tao amin’ny Jirama : Efa eny anivon’ny Fitsarana ny raharaha
Fanodinkodinam-bola tao amin’ny Jirama : Efa eny anivon’ny Fitsarana ny raharaha
26/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mazava. Efa eny amin’ny Fitsarana avokoa ny raharaha rehetra mahakasika ny fanodinkodinam-bola goavana, amina miliara maro, teo anivon’ny orinasa Jirama nandritra ny fitondrana Tetezamita.
Raha ny fanazavana azo teo anivon’ny Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly na ny Bianco mantsy, efa tontosa ny fanadihadiana sy ny fikarohana nataon’izy ireo. Tontosa soa aman-tsara ihany ny fanaovana na/sy fikarakarana ny « dôsie » rehetra mahakasika izany teo anivon’ny Bianco. Araka izany, voalaza fa efa nalefan’ity Birao mahaleotena miady amin’ny kolikoly ity eny anivon’ny Fitsarana avokoa ireo « dôsie » mahakasika io fanodinkodinam-bola teo anivon’ny orinasa Jirama tamin’ny fitondrana Tetezamita io. « Tsy misy raharaha sy « dôsie » mahakasika io fanodinkodinam-bola io intsony ao amin’ny Bianco. Tsy fantatra ihany koa anefa na mety mbola hisy tranga hafa hovoarainay na tsia aoriana ao. Efa nalefa eny amin’ny Fitsarana avokoa ny mahakasika ny fanadihadiana rehetra nataonay. Noho izany, tontosa ny andraikitray ary anjaran’ny Fitsarana amin’izay ny mandray an-tanana io raharaha fanodinkodinam-bola amina miliara teo anivon’ny Jirama io”, hoy ny fanazavana teo anivon’ny Bianco.
Raha araka ny tsilihan-tsofina mantsy, ary efa manomboka miely be ny resaka ankehitriny, fa mpandraharaha iray akaiky ny Filohan’ny Tetezamita tamin’izany (2009 – 2013) ary mbola miaraka aminy hatramin’izao sady tompona orinasa an-gazety eto an-dRenivohitra no anisany voarohirohy amin’io raharaha fanodinkodinam-bola teo anivon’ny orinasa Jirama io. Marihina ary tsiahivina mantsy fa anisan’ny nandrafitra ny Filankevim-pitantanana teo anivon’ity orinasa nasionaly mpamokatra herinaratra ity io mpandraharaha io tamin’izany fotoana. Raha ny marina, mpiray petsapetsa tao anatin’izany fanodinkodinam-bola goavana izany ity mpandraharaha ity sy ny Filohan’ny Tetezamita.
Ankoatra izay, anisany nitondran’ny minisitry ny Angovo, Lantoniaina Rasoloelison fanazavana, tamin’ny nandraisany io ministera miahy ny Jirama io fa ny fanodinkodinam-bola tamin’ny Fitondrana Tetezamita no nampitsipozipozy ary saika naharendrika tanteraka ny orinasa Jirama. Voalazan’ny minisitra tamin’izany fa tsy nampidi-bola mihitsy ity orinasa ity tamin’ny Fitondrana Tetezamita ary maty antoka hatrany. Noho izany, tsy afa-miala amin’ity raharaha fanodinkodinam-bola ity ilay mpandraharaha akaiky ny Filohan’ny Tetezamita tamin’izany ka hatramin’izao.
Antanimora sy Tsiafahy : MIISA 661 IREO NAHAZO FAMOTSORAN-TSAZY
Ny zoma 06 Janoary lasa teo dia namoaka didim-panjakana fanalefahan-tsazy sy famotsoran-keloka ny filoham-pirenena. Nandritra ny lahateny sy ny kabary izay nataony tamin’ny fifampiarabana tratry ny taona teny Iavoloha no nanambarany izany. Fanaon’ireo filohan’ny repoblika ...Tohiny
Vovonana ho an’ny fampandrosoana:MANKASITRAKA NY EZAKA VITAN’NY FILOHAM-PIRENENA
Fifidianana filoham-pirenena : Lany Dada aaa !!!!